Kushambadzira zviitiko zvekambani zvinokutungamira iwe kubudirira | ECommerce nhau
Paunenge uine eCommerce, kana chero kambani, kukoshesa kwakawanda kunoiswa pakuve nedhipatimendi rekushambadzira kana vangangoita vanhu vakazvipira kune iri basa. Asi wakambozvibvunza here kuti ndezvipi zviitiko zvekushambadzira zvekambani zviri?
Kana, sesu, iwe wakangoona kuti iwe hauzive chaizvo izvo kushambadzira zviitiko zvekambani hombe, kana kana uchinyatso kuzviita nemazvo, usazvidya moyo, tichajekesa kusahadzika kwacho.
1 Kushambadzira zviitiko zvekambani yakakosha kwazvo kuti ubudirire
1.1 Kutsvaga kwemusika
1.2 Mitengo yemitengo
1.3 Kushambadzira uye kutaurirana
1.3.1 Kukosha kwekutaurirana
1.4 Iva nedhatabhesi (kana rivake)
1.5 Zvichienderera mberi kugadzirisa
Kushambadzira zviitiko zvekambani yakakosha kwazvo kuti ubudirire
Kana iwe uine bhizinesi, chinonyanya kukosheswa ndechekuti ribudirire, kunyanya kuitira kuti kuyedza kwawakaita, zvese zvemari nekupa nguva, kuri kukosha chaizvo, handiti? Zvakanaka, mune izvo zvinogona kuve nehuremu hwakawanda kuve nekutarisa pane zvinonyatsoshanda. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti ndeapi mabasa akakosha ekutengesa ekambani.
Uye ndezvipi izvozvo?
Uku ndiko pamwe kwakaomarara kwezviitiko zvekushambadzira zvekambani asiwo iyo inogona kukupa ruzivo rwakanyanya uye neuyo kuwana zvibereko zvakanaka. Kutanga nekuti ichatarisa kuedza kwako pane chikamu chingangoshandiswa zvisirizvo, izvo zvichave zviri kudiwa zvakanyanya, nezvimwe. Uye chechipiri, nekuti nenzira iyi iwe uchave uchikwanisa kuziva munzira yakajairika mhando yevateereri yekutarisisa, ndivanaani vanokwikwidza, kuti unosiyana sei ...
Uchitende kana kwete, ndizvo zvinogona kukubatsira kugadzira nzira yako, kunyanya kusvika kune vatengi vaunoda.
Kuita chiitiko ichi, zvidzidzo zvemusika zvinoitwa, kushambadza kwezvigadzirwa zvitsva, bvunzo kuongorora izvo zvinodiwa (kana kuongorora kuti chigadzirwa ichocho chingagashirwe sei), nezvimwe.
Imwe yekushambadzira zviitiko zvekambani ndeiyi, uko mutengo wakakodzera kwazvo wezvigadzirwa unodzidzwa. Uye ndezvekuti vanamuzvinabhizimusi havaise mutengo pamadiro avo (kana zvirinani havafanirwe), asi zvirinani kuti udzidze kuti hunhu hwevashandisi hungave sei kana vakaona chigadzirwa pamutengo wakati, kana kune imwe .
Muzviitiko zvakawanda Mitengo inotemerwa nemutengo wekugadzira kana kuwana zvigadzirwa izvi pamwe nemitengo yevanokwikwidza. Ramba uchifunga kuti kana iwe ukachiisa zvakachipa kwazvo, vanhu vanozopokana kuti vatenge nekuti vangangofunga kuti mhando haina kunaka. Kana iwe ukaiita inodhura kupfuura yako makwikwi, ivo vanoenda kumwe kunhu. Nekudaro, mitengo mizhinji inowanzo kuve yakatenderedza manhamba akafanana (kunze kwemakopi, macones uye mamwe).
Kushambadzira uye kutaurirana
Tinogona kutaura kuti chiitiko ichi ndechimwe chezvakakosha mudhipatimendi rekushambadzira uye uko vazhinji vanotarisa uye vachienderana nenzvimbo ino yechiitiko. Asi, Zvinorevei kushambadza nekutaurirana?
Kushambadza ndiko kunoita kuti zvigadzirwa zvako, uye kambani yako, izivikanwe kune vashandisi. Fungidzira kuti une kambani inogadzira chigadzirwa icho, ikozvino, chaizobudirira nekuti vanhu vese vari kuchitsvaga. Asi kambani yako haina kushambadzira, haushambadzi uye hauonekwe. Vachakuwana here?
Hatigone kuti kwete, nekuti nekukurumidza kana kuti gare gare unogona kubva, asi unenge uine mikana mishoma pane yekuisa mari mukushambadzira kwechako, nekuti unenge uchibatsira vamwe kuti vakuzive.
Zvino, kuti uite kushambadzira, unofanira kutanga waziva wauchazotaura naye. Ndokunge, iwe unofanirwa kugadzira iyo mutengi munhu, mutengi akakodzera waunofanirwa kugutsa. Kuti uite izvi, unofanirwa kuona kuti ndeapi makore, bonde, basa, chinzvimbo chemuchato, kana uine vana, chinzvimbo munharaunda, nezvimwe. yeiye akakodzera mutengi kuti agadzire kushambadzira kwakakwana kunoenda kunanga kune vateereri.
Nekudaro, kune mamwe mabasa ekuti uite, senge zano reSEO pawebhu, kutsvaga mazwi akakosha ane chekuita nebhizinesi rako uye kuti vanhu vanotsvaga kuitira kuti vaedze kupinda mumhedzisiro yekutanga yeinjini dzekutsvaga.
Iwe watove kushambadza, iwe waisa mari mukushambadzira kukambani yako ... Asi zvakadii nezvekudyidzana nevashandisi? Izvo zvakakosha kuti Gadzira chiteshi chekutaurirana navo, ingave foni, email kana kunyangwe kuburikidza nesocial network.
Chinangwa ndechekuti ivo havafunge kuti kambani haina hanya nekusahadzika kwavo kana matambudziko, asi kuti ivo varipo, zvakaringana uye kubva kwauri kwauri, kuti vanzwe vachikosha uye, pamusoro pezvose, kuti vane basa newe.
Iva nedhatabhesi (kana rivake)
Ichi chiitiko chakakoshawo nekuti, kana iwe usina munhu wekutaura naye, ungaita sei kuti meseji yako iyambuke? Naizvozvo, zvakakosha kuva neizvi. Chaizvoizvo kuve nezita uye email (kana mune dzimwe nguva nhare) yevanhu vakanyoreswa mudura rako. Ehe, unogona kufunga nezve kutenga dhatabhesi, asi vane matambudziko maviri: kutanga, kuti mazhinji emaemail haachipo, saka unobhadhara hafu yezvaunotenga; Uye chechipiri, vazhinji veavo vari kunze vangangodaro vasina kupa mvumo yekuti dhata ravo ritengeswe, saka unotarisana nedambudziko kana vakakushuma (kunyanya mukurumbira).
Saka dhipatimendi rekushambadzira, pakati peimwe yezviitiko zvekushambadzira mukambani ndeiyi, kugadzira dhatabhesi yekutumira kushambadza uye naani wekuchengetedza kutaurirana.
Zvichienderera mberi kugadzirisa
Rimwe basa ndere, pasina kupokana, kuve mukugara uchichinja. Sezvazviri mufashoni kana kushongedza, kushambadza kunochinjawo, dzimwe nguva nekukurumidza zvakanyanya, uye unogona kuzviwana uri mumamiriro ezvinhu,, kamwe kamwe, zvawanga uchiita izvo zvakambokuunzira mabhenefiti, izvozvi hazviite.
Maitiro matsva, zvinoitika kune dzimwe nyika (kunyanya muUnited States), fashoni ... zvese zvinokanganisa kushambadzira kugadzirisa zviitiko uye kuita kuti zvibudirire.
Iye zvino zvaunoziva zvimwe zvekushambadzira zvekambani, unonzwisisa here kuti nei dhipatimendi iri rimwe rinonyanya kukosha uye kwaunofanirwa kutarisa kwakawanda kwako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Kushambadzira zviitiko zvekambani